Isolines के हो - प्रकारहरू र अनुप्रयोगहरू - Geofumadas
घर/ArcGIS-ESRI/Isolines के हो - प्रकार र अनुप्रयोगहरू
ArcGIS-ESRIशिक्षण CAD / जीआईएस
Isolines के हो - प्रकार र अनुप्रयोगहरू
कन्टूर लाइन एक रेखा हो जुन बराबर मानको उद्देश्यहरूमा मिल्छ। कार्टोग्राफीमा, isolines सँगै आउँछ भने एक औसत स्तर भन्दा माथी बराबरको उचाइ, जस्तै औसत समुद्री सतह। एक समोच्च नक्शा लाइनहरु को उपयोग गरी क्षेत्रको भूगोल को हाइलाइट प्रतिनिधित्व गर्न गाईड हो। यो नियमित रूपमा उचाई, झुकाव र उपत्यका र पहाडहरूको गहिराई देखाउन प्रयोग गरिन्छ। दुई नक्शा बीचमा पछाडि मानचित्रमा खाली ठाउँलाई मध्यवर्ती आकार भनिन्छ र शीर्षमा भेद देखाउँदछ।
आर्कजीआईएसको साथ तपाईं आइसोलिनहरू अझ राम्ररी प्रयोग गर्न सिक्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा कुनै नक्शाले कुनै पनि क्षेत्रको त्रि-आयामिक सतहलाई दुई आयामिक नक्सामा सञ्चार गर्न सक्छ। Isolines वा contours को नक्शा डिसिफर गरेर, ग्राहकले सतहको ढलान व्याख्या गर्न सक्दछ। यो क्षेत्रको गहिराई वा उचाई हो, भू-क्षेत्रहरूले क्षेत्रको भूगोलको बारेमा कुरा गर्न सक्दछ। लाइनहरूमा दुई isolines बीचको खाली ठाउँले महत्त्वपूर्ण डाटाको साथ ग्राहकलाई प्रदान गर्दछ।
रेखाहरू एकअर्कालाई पार नगर्ने दुवैको संयोजन वा झुकाव, सीधा हुन सक्छ। आइसोलाइनहरू द्वारा देखाइएको उचाइ सन्दर्भ सामान्यतया समुद्रको औसत उचाइ हो। आइसोलाइनहरू बीचको अनुक्रमिक स्पेसले अध्ययन अन्तर्गत सतहको झुकावलाई संकेत गर्दछ र यसलाई "अन्तरिम" भनिन्छ। आइसोलाइनहरू कडा रूपमा फैलिएको अवस्थामा, तिनीहरूले तिरछा ढलान देखाउनेछन्। अर्कोतर्फ, यदि आइसोलाइनहरू धेरै टाढा छन् भने, यसलाई नाजुक ढलान भनिन्छ। उपत्यकाका धाराहरू, जलमार्गहरूलाई कर्भ नक्सामा "v" वा "u" को रूपमा देखाइन्छ।
वक्रहरूलाई प्राय: उपसर्ग "iso" को साथ नामहरू दिइन्छ जसको अर्थ ग्रीकमा "समान" हुन्छ, म्याप गरिएको चरको प्रकार अनुसार। उपसर्ग "iso" लाई "isallo" संग प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ जसले निर्धारण गर्दछ कि फारम रेखा जोडिन्छ जहाँ दिइएको समय अवधिमा समान दरमा परिवर्तन हुन्छ। वक्र शब्द सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ भन्ने तथ्यको बावजुद, अन्य नामहरू प्रायः मौसम विज्ञानमा प्रयोग गरिन्छ, जहाँ निश्चित समयमा धेरै कारकहरू सहित टोपोग्राफिक नक्साहरू प्रयोग गर्ने बढी उल्लेखनीय सम्भावना हुन्छ। त्यसै गरी, समान रूपमा खाली ठाउँहरू र समोच्च रेखाहरूले समान ढलानहरू देखाउँछन्।
Isolines को इतिहास
समान मानको रेखाहरू जोड्ने बिन्दुहरूको प्रयोग लामो समयदेखि चलिरहेको छ भन्ने तथ्यको बावजुद तिनीहरू विभिन्न नामले चिनिन्छन्। कन्टूर लाइनहरूको पहिलो रेकर्ड गरिएको प्रयोग हार्लेम नजिकै स्पार्न जलमार्गको गहिराई देखाउनको लागि 1584 मा पिटर ब्रुइन्ज नामका एक नेदरल्यान्ड्सद्वारा गरिएको थियो। स्थिर गहिराइलाई जनाउने आइसोलाइनहरू अहिले "आइसोब्याट्स" भनेर चिनिन्छन्। 1700s भरि, रेखाहरू रेखाचित्र र नक्सामा पानी र क्षेत्रहरूको शरीरको गहिराइ र आकारहरू चित्रण गर्न प्रयोग गरिएको छ। एडमन्ड ह्यालीले 1701 मा अधिक आकर्षक विविधताको साथ आइसोगोनल कन्टूर लाइनहरू प्रयोग गरे। निकोलस क्रुक्वियसले सन् १७२७ मा मर्वेदे जलमार्गको ओछ्यान बुझ्न र कोर्नका लागि १ फ्याथम बराबरको अन्तरालका साथ आइसोबाथहरू प्रयोग गरे, जबकि फिलिप बुआचेले सन् १७३७ मा अंग्रेजी च्यानलका लागि १० फ्याथमको मध्यवर्ती अवधि प्रयोग गरे। १७४६ मा डोमेनिको भान्डेलीले प्रयोग गरे। रेखाहरू सतह चित्रण गर्न, मोडेना र रेगियोको डचीको लागि गाइड कोर्दै। 1 मा उनले पृथ्वीको औसत मोटाई मापन गर्न Schiehallion परीक्षण निर्देशित गरे। आइसोलिनको विचारलाई परीक्षणको रूपमा पहाडको ढलान जाँच गर्न प्रयोग गरिएको थियो। त्यसबेलादेखि, कार्टोग्राफीको लागि आइसोलिनहरूको प्रयोग एक साझा रणनीति बन्यो। यो रणनीति 1727 मा JL Dupain-Treil द्वारा फ्रान्स को लागि एक गाइड को लागी प्रयोग गरिएको थियो र 10 मा Haxo लाई Rocca d'Aufo मा आफ्नो उपक्रम को लागी प्रयोग गर्यो। त्यस समयदेखि, म्यापिङ र विभिन्न अनुप्रयोगहरूको लागि आइसोलाइनहरूको सामान्य प्रयोग भएको छ।
1889 मा फ्रान्सिस ग्याल्टनले व्यक्तिपरक वा मात्रात्मक हाइलाइटहरूमा एकरूपता वा तुलनात्मकता देखाउने रेखाहरूको लागि परिप्रेक्ष्यको स्रोतको रूपमा अभिव्यक्ति "isogram" प्रस्ताव गरे। अभिव्यक्ति "isogon", "isoline" र "isarhythm" सामान्यतया isolines प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गरिन्छ। अभिव्यक्ति "isoclines" ले एक रेखालाई बुझाउँछ जसले समान ढलानको साथ फोकस प्राप्त गर्दछ।
प्रकार र isolines को अनुप्रयोग
Isolines नक्शा र ग्राफिक र मापन जानकारी को प्रतिनिधित्व मा व्यापक प्रयोग गरीएको छ। समोच्च लाइनहरू व्यवस्थाको रूपमा वा प्रोफाइल दृश्यको रूपमा कोरिन सकिन्छ। फ्ल्याट दृश्य भनेको गाइड प्रतिनिधित्व हो, ताकि दर्शकले यसलाई माथिबाट देख्न सकून्। प्रोफाइल दृश्य नियमित रूपमा प्यारामिटर हुन्छ जुन ठाडो रूपमा तोकिएको हुन्छ। उदाहरण को लागी, क्षेत्र को परिदृश्यहरु लाईन को एक व्यवस्था या व्यवस्था को रूप मा नक्शा गर्न सकिन्छ, जबकि क्षेत्र मा वायु प्रदूषण को एक प्रोफाइल दृश्य को रूप मा देख्न सकिन्छ।
यदि तपाईंले गाइडमा अत्यन्तै ठाडो ढलान फेला पार्नुभयो भने, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि आइसोलाइनहरू "वाहक" आकारहरूको रूपरेखामा सँगै आउँछन्। यस अवस्थाको लागि, अन्तिम समोच्च रेखामा कहिलेकाहीँ तल्लो जमीनलाई संकेत गर्ने टिक चिन्हहरू हुन्छन्। वर्षा पनि एकअर्काको नजिकको समोच्च रेखाहरू मार्फत देखाइएको छ र, लगभग कुनै पनि अवस्थामा, तिनीहरू एकअर्कालाई सम्पर्क गर्दैनन् वा दृढ रूपमा स्थिर छन्।
कन्टूर लाइनहरू विभिन्न फाँटहरूमा प्रयोग गरिन्छ स्थानको बारेमा धेरै जानकारी देखाउन। जे भए पनि, isolines नाम दिनका सर्तहरू उनीहरूले बोलेको जानकारीको प्रकारले परिवर्तन गर्न सक्दछन्।
पर्यावरण विज्ञान: इस्पोल्थहरू लाइनहरू बनाउन प्रयोग हुन्छ जुन एक चर देखाउँदछ जुन एक बिन्दुमा अनुमान गर्न सकिदैन, यद्यपि यो जानकारीको सहायक कम्पनी हो जुन ठूलो क्षेत्रमा स is्कलन गरिन्छ, उदाहरणका लागि जनसंख्याको मोटाई।
त्यस्तै, आइसोफ्लोर वातावरणमा, एक isoplette लाई तुलनात्मक जैविक प्रजातिहरूको साथ जिल्लालाई सम्बद्ध गर्न प्रयोग गरिन्छ, जसले पशु प्रजातिहरूको यातायात र बान्कीका उदाहरणहरू प्रदर्शन गर्दछ।
वातावरणीय विज्ञान: इकोलोजिकल विज्ञानमा isolines को बिभिन्न प्रयोगहरू छन्। प्रदूषण मोटाई नक्शा प्रदूषण को उच्च र तल्लो स्तर संग क्षेत्र प्रदर्शन गर्न को लागी उपयोगी छ, स्तर जसले प्रदूषण क्षेत्रमा बढ्दो सम्भावना को अनुमति दिन्छ।
आइसोप्लेट्स संक्षारक वर्षा प्रदर्शन गर्न प्रयोग गरिन्छ, जबकि आसोबिलास क्षेत्र मा हप्ते संदूषणको स्तर देखाउन प्रयोग गरिन्छ।
समोच्च रेखाको बिरुवा रोपण र फुरुइ forms रूपहरूमा प्रयोग भएको छ, जसले जमिनको विच्छेदनलाई क्षेत्रको एक असाधारण डिग्रीमा कम गर्छ, जलमार्ग वा अन्य निकायहरूको सिमानामा पानी को
सामाजिक विज्ञान: समोच्च लाइनहरू प्राय: समाजशास्त्रमा प्रजातिहरू प्रदर्शन गर्न वा विशिष्ट क्षेत्रमा भेरिएबलको सम्बन्धित अनुसन्धान देखाउन प्रयोग गरिन्छ। फाराम लाइनको नाम डेटाको प्रकारले परिवर्तन गर्दछ जुन यसले कार्य गर्दछ। उदाहरणको लागि, अर्थशास्त्रमा, isolines लाई हाइलाइटहरू प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन इलाकामा परिवर्तन हुन सक्दछ, आइसोडपेनसँग मिल्दोजुल्दो आन्दोलनको समयको लागतको बारेमा बोल्दा, आइसोटिमले कच्चा मालको स्रोतबाट यातायातको लागतलाई जनाउँदछ। Isoquant वैकल्पिक जानकारी को उपयोग को उत्पादन को मात्रा को वृद्धि को बारे मा कुरा गर्दछ
तथ्या :्कहरू: मापन योग्य परीक्षणहरूमा, isolines सम्भावनाको मोटाई को अनुमानको साथ दृष्टिकोणहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ, जसलाई isodensity रेखा वा isodensanes भनिन्छ।
मौसम विज्ञान: मौसमविज्ञानमा आइसोलाइन्सको ठूलो उपयोग छ। मौसम स्टेशनहरू र मौसम उपग्रहहरूबाट प्राप्त जानकारीले मौसमविद्हरूको नक्सा बनाउन मद्दत गर्दछ, जुन मौसम अवधि जस्तै वर्षा, वायवीय शक्ति जस्ता संकेत गर्दछ। आइसोथर्म र आइसोबारहरू विभिन्न थर्मोडायनामिक कम्पोनेन्टहरू प्रदर्शन गर्नको लागि कभरहरूको सेटमा असंख्य सेटहरूमा प्रयोग गरिन्छ जसले मौसम अवस्थालाई प्रभाव पार्दछ।
तापमान अध्ययन: यो आइसोलाइनको एक प्रकार हो जुन पोइन्ट्सलाई बराबर तापक्रम, आइसोथर्महरू र क्षेत्रहरू जो बराबर सूर्य-उन्मुख विकिरणसँग एक अर्कामा जोडिन्छ आइसोहेल भनिन्छ। Isolines, औसत वार्षिक तापमान बराबर isogeotherms भनिन्छ र एक औसत जाडो तापमान वा समकक्ष संग सम्बन्धित क्षेत्र isochemicals भनिन्छ, जबकि औसत गर्मी तापमान isothere भनिन्छ।
हावा अध्ययन: मौसम विज्ञानमा, एक कन्टूर लाइन जुन स्थिर हवाको गति जानकारीसँग जोड्दछ यसलाई isotach भनिन्छ। एक isogon एक स्थिर हावा संकेत गर्दछ
वर्षा र आर्द्रता: धेरै शब्दहरू isolines नाममा प्रयोग हुन्छन् जुन पोइन्ट्स वा वर्षा र हिलो सामग्री सहितको क्षेत्रहरू देखाउँदछ।
Isoyet वा Isoyeta: स्थानीय वर्षा देखाउनुहोस्
इसोचलाज: ती रेखाहरू हुन् जुन असिनाको निरन्तर पुनरावृत्ति भएको क्षेत्रहरू देखाउँदछ।
Isobront: तिनीहरू गाईडहरू हुन् जुन ती क्षेत्रहरू हुन् जसले एकै साथ तुफानको कार्यहरू प्राप्त गर्दछन्।
आइसोनेफ क्लाउड स्प्रेड देखाउनुहोस्
Isohume: ती रेखाहरू हुन् जुन क्षेत्रहरू सापेक्ष स्थिर पालनाका साथ एकजुट गर्छन्
आइसोड्रोस्थर्म: शीत विन्दु स्थिरीकरण वा वृद्धि भएको क्षेत्रहरू देखाउँदछ।
आइसोपेक्टिक: छुट्याउने बरफ वितरण मितिहरूको साथ स्थानहरूलाई संकेत गर्दछ, जबकि आइसोट्याकले डिफ्रोस्टिंग मितिहरूलाई जनाउँछ।
ब्यारोमेट्रिक दबाव: मौसम विज्ञानमा, वायुको चाप अनुसन्धान भविष्यको मौसम डिजाइनको पूर्वानुमान गर्न आवश्यक छ। ब्यारोमेट्रिक वजन एक रेखामा प्रदर्शित हुँदा समुद्री सतहमा घट्छ। एक isobara एक रेखा हो कि एक स्थिर जलवायु वजन को साथ जिल्लाहरु लाई जोड्दछ। Isoallobars एक विशेष समयावधिको लागि तौल परिवर्तनको साथ गाईडहरू हुन्। यसैले, आइसोलोब्बारलाई केटोआलोबार र एनायलबारहरूमा अलग्गै राख्न सकिन्छ, जसले वजनको परिवर्तनमा छुट्टै छुट्टै घट्ने संकेत गर्दछ।
थर्मोडायनामिक्स र ईन्जिनियरि:: यद्यपि ध्यान केन्द्रित यी क्षेत्रहरूमा कहिलेकाँही एक दिशानिर्देश लाइन समावेश छ, तिनीहरूले जानकारी र चरण ग्राफिक्स को ग्राफिक प्रतिनिधित्व मा आफ्नो खोज पत्ता लगाउँछ, अध्ययन को यी क्षेत्रहरुमा isolines को सामान्य प्रकार को एक भाग को एक हिस्सा हो।
Isochor स्थिर मात्रा मान प्रतिनिधित्व गर्दछ
Isoclines तिनीहरू विभेदित अवस्थाहरूमा प्रयोग गरिन्छ
आइसोडोज रेडिएसनको बराबर भागको अवधारणलाई बुझाउँछ
आईसोफोट यो एक स्थिर रोशनी हो
चुम्बकत्व: समोच्च रेखाहरू पृथ्वीको आकर्षक क्षेत्र चिन्तनको लागि अविश्वसनीय उपयोगी छ। आकर्षण अनुसन्धान र चुम्बकीय गिरावट मा मद्दत।
आईसोगोनिक वा आइसोगोनिक समोच्च रेखाले लगातार आकर्षक गिरावटको लाइनहरू देखाउँदछ। रेखाले शून्य गिरावट देखाउँदछ Agonic रेखा। एक आइसोलिन जसले हरेक दृष्टिकोणलाई सँगै ल्याउँदछ, साथसाथै स्थिर आकर्षक शक्तिलाई आइसोडायनामिक रेखा पनि भनिन्छ। एक आइसोक्लिनिक लाइनले सबै क्षेत्रीय कन्फिगरेसनहरूलाई समकक्ष आकर्षक डाइभको साथ ल्याउँदछ, जबकि एक क्लीनिक लाइनले सबै क्षेत्रहरूलाई शून्य आकर्षक डाइभहरू सँगै ल्याउँछ। एक isophoric रेखा आकर्षक पतन को लगातार वार्षिक विविधता संग प्रत्येक दृष्टिकोण प्राप्त गर्दछ।
भौगोलिक अध्ययन: Isolines को सब भन्दा राम्रो ज्ञात प्रयोग - रूपरेखा, क्षेत्रको उचाई र गहिराईको प्रतिनिधित्वको लागि हो। यी रेखाहरू टोपोग्राफिक नक्शामा ग्राफिक रूपमा उचाई, र स्नानगोलमा देखाउन प्रयोग गरिन्छ। यी टोपोग्राफिक वा बाथिमेट्रिक नक्शा दुबै सानो क्षेत्र देखाउनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ वा ठूलो जमिन जस्तो क्षेत्रहरूका लागि। कन्टूर लाइनहरू बीचको क्रमिक अन्तरिक्ष, मध्यवर्ती भनिन्छ दुबै बिचमा वृद्धि वा गहराईलाई संकेत गर्दछ।
समोच्च रेखाहरू भएको क्षेत्रको कुरा गर्दा, नजिकका रेखाहरूले ढलान वा उच्च कोण देखाउँछन्, जबकि टाढाको रूपरेखाले उथले ढलानको कुरा गर्छ। भित्रको बन्द सर्कलहरूले बललाई संकेत गर्दछ, जबकि बाहिरले तलको ढलान देखाउँछ। समोच्च नक्सामा सबैभन्दा गहिरो सर्कलले देखाउँछ जहाँ क्षेत्रमा डिप्रेसन वा क्रेटरहरू हुन सक्छन्, जसमा सर्कल भित्रबाट "हाचुर" भनिने रेखाहरू देखाइन्छ।
भूगोल र समुद्रशास्त्र: समोच्च नक्शा सहायक स्थलाकृति, भौतिक र वित्तीय पक्षहरु को दुनिया को सतह मा हाइलाइट अनुसन्धान मा प्रयोग गरीन्छ। आइसोपाच समोच्च रेखा हो जुन भूवैज्ञानिक इकाइहरूको बराबर मोटाईको साथ केन्द्रित हुन्छन्।
थप रूपमा, समुद्रशास्त्रमा, पानीको कन्टूर क्षेत्रहरू समोच्च रेखाहरू बराबर हुन्छन जसलाई आइसोपिकनास भनिन्छ, र आइसोहलिन्सले बिन्दुलाई समुद्री समुद्री लवणको साथ जोड्दछ। आईसोब्याथीर्म्स समुद्रमा बराबर तापक्रममा केन्द्रित छन्।
इलेक्ट्रोस्टेटिक्स: अन्तरिक्षमा इलेक्ट्रोस्टेटिक्स प्राय: isopotential नक्शाको साथ देखाईन्छ। स्थिर विद्युतीय सम्भावनाको साथ पोइन्टहरूमा मिल्नु पर्ने वक्रलाई isopotental वा इक्स्पोटेंशियल लाइन भनिन्छ।
समोच्च नक्शामा समोच्च रेखाका विशेषताहरू
कन्टूर नक्शा केवल आरोहणको प्रतिनिधित्व मात्र होइन, वा इलाकाको चढाई वा गहिराईको मार्गदर्शक हो, तर आइसोलिनहरूका हाइलाइटहरूले म्याप भइरहेको परिदृश्यको अझ उल्लेखनीय समझ प्रदान गर्दछ। यहाँ केहि हाइलाइटहरू छन् जुन प्राय: मानचित्रणमा प्रयोग गरिन्छ:
रेखाको प्रकार: यो डटेड हुन सक्छ, बलियो वा चलाउन सकिन्छ। एक बिन्दु वा रन लाइन अक्सर प्रयोग गरिन्छ जब बेस कन्टूरमा जानकारी हुन्छ जुन बलियो रेखाले देखाउँदछ।
रेखा मोटाई: यो निर्भर गर्दछ कि कती रेखा वा बाक्लो रेखा कोरिएको छ। समोच्च नक्शा प्राय: क्षेत्रको उचाईमा विभिन्न संख्यात्मक गुणहरू वा प्रजातिहरू देखाउन विभिन्न मोटाईको रेखासँग रेखाचित्रहरू कोरिन्छन्।
रेखा रंग: यस प्रकारको कन्टूर लाइन छायांकन आधार कन्टूरबाट पहिचान गर्नको लागि गाइडमा उतार-चढाव हुन्छ। लाइन शेडिंग संख्यात्मक गुणहरूको विकल्पको रूपमा पनि प्रयोग गरीन्छ।
संख्यात्मक मुद्रांकन: यो सबै समोच्च नक्शामा महत्त्वपूर्ण छ। यो सामान्यतया समोच्च रेखाको नजिक बनेको हुन्छ वा गाइड समोच्चमा देखा पर्न सक्छ। संख्यात्मक मानले ढलानको प्रकार छुट्याउन मद्दत गर्दछ।
टोपोग्राफिक मानचित्र उपकरणहरू
पारम्परिक कागज नक्शा isolines वा आकृतिहरू म्यापि forको लागि मात्र विधि छैन। उनीहरू महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने तथ्यलाई बावजुद, नवीनतामा प्रगतिको साथ, नक्सा हालसालै अझ उन्नत संरचनामा छन्। यससँग मद्दत गर्न धेरै उपकरणहरू, बहुमुखी अनुप्रयोगहरू र प्रोग्रामिंग पहुँचयोग्य छन्। यी नक्शा बढ्दो सटीक हुनेछ, बनाउनको लागि एकदम चाँडो, प्रभावकारी रूपमा परिमार्जन योग्य हुनेछ र तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो साझेदार र सहयोगीहरूलाई पठाउन सक्नुहुनेछ! अर्को, संक्षिप्त विवरणको साथ यी उपकरणहरूको अंशमा सन्दर्भ बनाइन्छ
गुगल नक्सा संसारभरि जीवन बचाउने हो। यो शहर अन्वेषण गर्न प्रयोग गरिन्छ, र केहि अन्य विभिन्न उद्देश्यका लागि। यसमा धेरै "दृश्यहरू" पहुँचयोग्य छन्, उदाहरणका लागि: यातायात, उपग्रह, स्थलाकृति, सडक, आदि। विकल्प मेनुबाट "ल्यान्डस्केप" तह सक्रिय गर्नाले तपाइँलाई स्थलाकृतिक दृश्य (कन्टुर रेखाहरूसँग) दिनेछ।
गाय, आर्कजीआईएस, ब्याककन्ट्री नेभिगेटर (बहुमुखी अनुप्रयोगहरू)
दुबै एन्ड्रोइड र आईओएसका लागि अन्य धेरै पोर्टेबल अनुप्रयोगहरू जस्तै, आईफोन ग्राहकहरूले गाइया जीपीएस प्रयोग गर्न सक्दछन्। यसले ग्राहकलाई टोपोग्राफिक नक्शाको साथ बिभिन्न प्रकारका प्रदान गर्दछ। यी अनुप्रयोगहरू निःशुल्क वा भुक्तान गर्न सकिने उपयोगिताको आधारमा भुक्तान गर्न सकिन्छ। मार्ग अनुप्रयोगहरू केवल टोटोग्राफिक डाटा प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गरिदैन, तर तिनीहरू पनि धेरै उपयोगी छन्। आर्कजीआईएस अनुप्रयोग र बिभिन्न ईएसआरआई अनुप्रयोगहरू मात्र म्यापि purposes उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तपाईं मोबाइल फोनमा सबै क्षमताहरूसँग खेल्न सक्नुहुन्न, र यो ठाउँ हो जहाँ कार्य क्षेत्रहरू र पीसीहरू नायक हुन्। तपाइँको अर्को कार्य समाप्त गर्न मद्दत गर्न त्यहाँ अनलाइन चरणहरू र स्थापना योग्य प्रोग्रामिंग अनुकूलनहरू छन्। क्यापटो एक प्रोग्राम-आधारित मार्गदर्शन उपकरण हो जुन तपाईंलाई अनुकूलित टोपोग्राफिक नक्शा प्रिन्ट गर्न अनुमति दिन्छ। थप रूपमा, यसले तपाईंलाई तपाईंको GPS उपकरणहरू वा सेल फोनमा पठाउन / सार्न अनुमति दिन्छ। थप रूपमा, यसले अनुकूलन वा नक्शा समर्थन गर्दछ र विभिन्न ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्दछ।
यो समर्थन प्रदायकको रूपमा देख्न सकिन्छ। यो केही हदसम्म क्यालोटो जस्तै (माथि उल्लेख गरिएको) हो, यद्यपि यसले क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकामा केन्द्रित छ (हामी साँच्चिकै विश्वस्त छौं कि उनीहरूले बिभिन्न राष्ट्रहरूलाई पनि समेट्नेछन्!)। तिनीहरू विस्तृत कस्टम नक्शा प्रदान गर्दछन्, टोपोग्राफिक नक्शा, सेटेलाइट छवि र कुनै पनि यूएस जिल्लाको खुल्ला मैदान चेस नक्शा सहित। UU धेरै उच्च गुणस्तरको नक्शा, जुन तपाईं अनलाइन हेर्न सक्नुहुनेछ वा थोरै लागतको लागि पहिलो चरणको छापको रूपमा पठाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईका लागि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ आर्कजीआईएस प्रशिक्षण 24 /7समर्थन र आजीवन पहुँचको साथ Edunbox मा प्रत्यक्ष।
लेख TwinGEO को लागि एक सहकार्य हो, हाम्रो मित्र अमित संचेती द्वारा, जो एक एसईओ कार्यकारीको रूपमा भित्र काम गर्दछ एडुनबक्स र त्यहाँ उसले एसईओ र सामग्री लेखन सम्बन्धित सबै कामहरू सम्हाल्छ।
इन्स्टाग्राम - https://www.instagram.com/amitsancheti.12/
फेसबुक - https://www.facebook.com/amit.sancheti.12
लिंक्डिन - https://www.linkedin.com/in/amit-sancheti-461469171/
ट्विटर - https://twitter.com/AmitSancheti14
फेरो २० ge० विश्व जियोस्पाटियल फोरममा भू-स्थल र निर्माणको लागि यसको दूरदर्शी थ्रीडी टेक्नोलोजी प्रदर्शन गर्दछ
टेट्रिस खेल, भूगोल सिक्दै
AutoCAD पाठ्यक्रम - सजिलो सिक्नुहोस्
यो स्क्र्याचबाट AutoCAD सिक्नको लागि डिजाइन गरिएको कोर्स हो। AutoCAD सहयोगी डिजाइनका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय सफ्टवेयर हो ...